Nkọwa niile gbasara ngwa agha ọhụrụ dị omimi nke Arya Stark na 'Egwuregwu ocheeze' - Ntụrụndụ
Nkọwa niile gbasara ngwa agha ọhụrụ dị omimi nke Arya Stark na Egwuregwu ocheeze
Ọ nwere ike bụrụ naanị 'onye na -ese ihe.'
Ịdọ aka na ntị: Akwụkwọ a nwere ndị na -emebi ihe maka Egwuregwu nke ocheeze oge asatọ.
Nlaghachi nke Egwuregwu nke ocheeze wetara nde mmadụ ọ joyụ n'abalị ụnyaahụ. Ọ bụ ezie na ọ dị mma ịhụ Arya Stark ka ya na ndị ezinụlọ ya fọdụrụ, ahịrị nkata dị egwu pụtara na ngwa ọgụ ọhụrụ dị omimi o nyere.
Nke a bụ ihe merenụ: Arya na -aga ileta Gendry, ebe ha na -eme ihe ọchị na -atọ ọchị, wee jụọ ya ma ọ nwere ike ịkpụpụtara ya ngwa agha ọ chọrọ. . 'Ị nwere ike ime ya?' Gendry nwere mgbagwoju anya maka ihe kpatara o ji achọ ngwa ọhụrụ a, na -eche na o nweela mma agha ya na mma agha nke emere n'oge na -adịbeghị anya nke ejiri ọla Valyrian mee.
Site n'ile ihe osise ahụ, ngwa agha ahụ na -abịa n'akụkụ abụọ - ha abụọ nwere isi nwere isi. Ihe ngosi efu Ọ bụ Joanna Robinson na -atụ aka na nhazi ọhụrụ a nwere ike bụrụ ihe Gaa nna ukwu ngwa agha Tommy Dunne na -ekwu maka ya na pọdkastị 'Still Watching'. Enwere otu okike na oge asatọ nke dị oke ịtụnanya, 'ọ kwuru . 'Ọ ga -abụ onye na -ese ihe. Nke ahụ dị mma imecha. Ọ dị mma imepụta, [ọ dị ukwuu] ịkepụta ya nke na a ga-emegharị ya ọzọ wee mee ya ka ọ bụrụ ihe abụọ dị iche iche.
ihe ị ga -enweta mama maka ụbọchị nne
Robinson kwukwara na anyị nwere ike hụla Arya ka ọ na -eji ihe okike a dị ka ube na -adọkpụ maka oge asatọ. Ihe osise a na -egosi na dragonglass dị na ngwa agha, otu n'ime ihe nwere ike igbu White Walker - yabụ na ọ ga -aba uru ka ndị agha Night King na -abịaru nso. Ụfọdụ chere na njedebe nke ọzọ nwere ike bụrụ nchara Valyrian.
Ndị mgbasa ozi soshal midia nwere obi ụtọ maka mmepe a.
Ọrụ ọhụrụ a ọ ga -abụ oge mgbanwe n'ọgụ a na -alụso ndị nwụrụ anwụ? Ikekwe ihe na -ewepụta abalị abalị n'onwe ya? Anyị ga -ahụ.
afọ ole bụ laurie hernandez
igbe braids nwere ọla na eriri
ego ole bụ iwepu ntutu laser underarm
ihe nkiri onyonyo kacha elu nke afọ 2000
agụ owuru elu ekike echiche